Thokozani Langa 9 ngoNhlolanja 1972 - ubye ziwe ngelika Somnandi ngumculi wohlobo lomculo ka Maskandi osuka endweni yaseMahlabathini, Kwa-Zulu Natal. Ngonyaka w
Abantu baseNingizimu Afrika
ⓘ Thokozani Langa 9 ngoNhlolanja 1972 - ubye ziwe ngelika Somnandi ngumculi wohlobo lomculo ka Maskandi osuka endweni yaseMahlabathini, Kwa-Zulu Natal. Ngonyaka w ..
UbuKhrestu IZimbabwe Amazwe eYurophu IYukreyini IViyetnami ITshile ISpeyini IShayina I-Ostreliya Amazwe ngolimi INingizimu Afrika I-Itiyopiya Amazwe e-Eshiya IButswana I-Angola Amazwe e-Afrika Amazwe Inkolo
ⓘ Thokozani Langa
Thokozani Langa 9 ngoNhlolanja 1972 - ubye ziwe ngelika Somnandi ngumculi wohlobo lomculo ka Maskandi osuka endweni yaseMahlabathini, Kwa-Zulu Natal. Ngonyaka we-2012 kuMklomelo woMculo waseNingzimu Afrika SAMA ewinela i-alibhamu engu ngqa phambili kumculo kwaMaskandi, enesihloko esithi I-Protection Order.
Ngonya wezi-2004 wasayinwa yinkampani ekhiqiza umculo ebizwa ngokututhi yi-Bula Music ukuze akhiphe i-alibhamu yakhe yesithatthu. Emva kukuqgama emsakweni wezwe kanye nasohlwelweni lomculo wesintu elabe lidlala kumabonakude alizawa ngokuthi Ezodumo, igama lakhe laqokwa kuma- SAMA ngonyaka wezi-2013. Lapha wabe eqokelwe kwisigaba se-alibhamu engu ngqa phambili kuMasikandi kanye nengu ngqa phambili kuMbaqanga. Lapha wabe eqokelwe amalibhamu akhe womabili okuyilawa, Iphepha Nepeni 2005 kanye nethi Lishonil Ilanga 2006. Kulesigaba wabe eqhathwe neqembu lombaqanga i-Soul Brothers kanye noBhekumuzi Luthuli.
OkaLanaga wake wabe sembangweni nomunye nomculi kamsakandi uBhekumuzi Luthuli. Ukungathelelani amanzi kwabo kwaze kwaholela ekutheni uLanga akhiphe i-alibhamu eyabe inesihloko esithi Phuma Kimi 2007. Le-alibhamu yanqoba kuMklomelo woMculo weSintu waseNingizimu Afrika kuMandulo ngonyaka wezi-2007, izizwa kwisigabe seCiko leSilisa elihamba phambili.
Igama Lami 2014
I-Protection Order Ukuvikeleka oKugunyaziwe 2011
Khuzeka Mshana 2015
Ipeni Nephepha 2005
Phuma Kimi 2007
Sthanda iFamily 2010
2012 - UMklomelo woMculo ewaseNingzimu Afrika SAMA - I-Protection Order - Wanqoba
2007- UMklomelo woMculo weSintu waseNingizimu Afrika SATMA - Phuma Kimi - Wanqoba
Thokozani langa lishonile ilanga 2005
String Quartet - Stimela - Straatligkinders T Theatre ibhendi - Thokozani Langa - Thwalofu - TKZee - Trenton and Free Radical - Trevor Jones U Uboneni
Elvis Blue for Elvis Blue 2CD Special Edition Best Maskandi Album: Thokozani Langa for I - Protection Order Best Kwaito Album: Big Nuz for Pound for Pound
Omasikandi abagamile ngalesi sikhathi kubala Umgqumeni ongasekho emhlabeni, Thokozani Langa Mtshengiseni, Igcokama Elisha, Jaiva Zimnike, Amageza Amahle nabanye
Wikipedia: Thokozani Langa